Antsampanahy Krismasy Asabotsy 14 Desambra 2013 - Madagascar-Tribune.com
Ny Amboarampeo Washington DC dia manomana Antsampanahy lehibe ho fankazalana ny Krimasy ny Asabotsy 14 Desambra 2013 manomboka amin’ny 3 ora hariva ao amin’ny Wesley Theological Seminary, Washington DC izay hanasany ny Malagasy rehetra ao Washington DC sy ny manodidina sy ireo Malagasy any Amerika avaratra.
Karazana gadona maro samihafa no hohiran-dry zareo amin’izany toy ny hira Classique izay ahitana ny hiran’ieo mpamoronkira malaza toa an-dry Antonio Vivaldi, Mozart, Handel, John Rutter ; ary koa ny Ban-kira Malagasy ary ireo hira Krismasy izay notsongain-dry zareo manokana.
Ao aorian’ny Antsampanahy dia hisy Gala Evangelique sy fivarotana sakafo ary fiaraha-misakafo.
Ny Amboarampeo Washington DC dia Antoko Mpihira Malagasy ao anatin’ny Fiangonana Malagasy ao Washington DC (Etazonia). Ahitana mpikambana miisa eo amin’ny 35 eo. Ny Fitoriana ny filazantsara amin’ny alalan’ny hira no tena ifotoran’ny Amboarampeo.